EBUBO MPỤ EGO : GỌỌMENTI NAỊJIRIYA KWESỊRỊ ỊKWỤ ONYEMA N’AZỤ WERE HỤ ISI OKWU AHỤ – ỌHANEZE – hoo!haa!!
EBUBO MPỤ EGO : GỌỌMENTI NAỊJIRIYA KWESỊRỊ ỊKWỤ ONYEMA N’AZỤ WERE HỤ ISI OKWU AHỤ – ỌHANEZE
Owere – Otu ndị ntorobịa Ọhaneze na-aza Ohaneze Youth Council ekwuola na ọ tụrụ anya na Gọọmenti Naịjiriya agaghị agbahapụ Mazị Alen Ifechukwu Onyema, Onyenwe Ụlọ ọrụ njem ụgbọelu Air Peace n’ebubo ime mpụ ego.
N’okwu ọ gwara ndị nta akụkọ n’Owere n’ehihie a, Nnukwu Onyeisi otu a n’ụwa nile bụ Mazị Igboayaka O. Igboayaka kwupụtara na “dịka ezigbo nwa amaala, anyị kwenyere na nkọwa Mazị Onyema nyere banyere ebubo ahụ bụ eziokwu.
” N’ihi ya, otu Ohaneze Youth Council tụrụ anya na Gọọmenti Etiti ga-akwudo ya n’azụ were soruo okwu ahụ n’ isi.
N’okwu ya, Mazị Alen Onyema, gọpụrụ onwe ya na itinye aka na mpụ ego ọbụla ma kwukwaa hoo!haa! na ebubo asị ndị ahụ esoghị na ihe e jiri mara ya dịka mmadụ nakwa dịka onye oji-ego-achụ-ego nke sọọsọ ebumnuche ya bụ iwulite Naịjiriya ma wetakwa ọdịmma ọhaneze.
Onyema gakwara n’ihu mee ka ọhaneze mara na egwu ọbụla adịghị
“Ndị Ọkaiwu m na-elebakwa okwu ahụ anya. E metubeghị m mpụ ego na ndụ m. Kobo ọbụla n’ime ego ahụ m zigara Amerịka maka ịzụ ụgbọelu si n’aka ndị ụlọ akụ Naịjiriya bụ CBN were gaa
“E jikwa ya mee ihe e kwuru e ji ya eme. Ndị ụlọ ọrụ mba Amerịka natara ego ndị ahụ ka nọkwa ya. A dị m njikere ịbịa zara ọnụ m n’ụlọ ikpe mba Amerịka ”
Ụlọ ọrụ Ọkaiwu mba Amerịka dị na Jịọjịa boro nwamadị ahụ bụ onyenwe ụlọ ọrụ Air Peace ebubo ime mpụ ego karịrị Nde Dọla iri abụọ site na iji akwụkwọ adigboroja were si Naịjiriya ziga ego Amerịka maka iji zụ ụgbọelu.
Mazị Igboayaka, onye chetara oke mbọ Onyema gbara iji ụgbọelu ya si Sawụt Afrịka were bụlata ụmụ amaala Naịjiriya oge nsogbu mwakpo akpomasị agbụrụ na-akpọtụ na mba ahụ kwuru na “Ndigbo nakwa ndị Naịjiriya nile kwesịrị isoru okwu ahụ n’isi ka a ghara ịkwada ya bụ ezigbo nwa amaala na – agba mbọ ịkwalite obodo a bụ Naịjiriya”
Previous Post: AKWAMIKO MAHADUM :ACHỤỌLA ỤMỤ AKWỤKWỌ ABỤỌ ỌZỌ
Next Post: MAHADUM GREGỌRỊ UTURU ICHI ODUMEJE DỌKỊNTA, O ZIRI EZI?